RASMI: Alexis Sanchez oo ka tagay Man United, heshiis joogto ahna ugu biiray Kooxda Inter Milan – Gool FM
Haaruun August 6, 2020
(Manchester) 06 Agoosto 2020. Alexis Sanchez ayaa si rasmi ah uga tagay kooxda Manchester United, waxaana uu dhammaystiray heshiiskii joogtada ahaa ee ugu biiray naadiga Inter Milan ee dalka Talyaaniga.
Kooxda Inter Milan ayaa ku dhawaaqday in Alexis Sanchez uu beeca xorta ah ugu soo biiray Nerazzurri, iyadoo weeraryahankan reer Chile uu heshiis cusub oo joogto ah u saxiixay kooxda, kaasoo ku eg 30 bisha June ee sanadka 2023-ka.
Sanchez ayaa heshiis amaah hal xilli ciyaareed ah ugu dhaqaaqay Inter Milan bishii Agoosto sanadkii 2019-kii, waxaana uu 29 kulan u ciyaaray kooxda ku ciyaarta garoonka San Siro isagoo u dhaliyey afar gool.
Markii uu yimid Waqooyiga Talyaaniga, wuxuu xiriir la sameeyay saaxiibtiisii hore ee Man United ay ka wada tirsanaayeen ee Romelu Lukaku, iyadoo markii dambe uu kooxda kula soo biiray Ashley Young.
Isku aadka Kulankii ugu horreeyey ee siddeed dhammaadka Europa League oo la ogaaday & Manchester United oo la ciyaareysa...